मृत्यु भएका युवाको रिपोर्ट नेगेटिभ « Farakkon
मृत्यु भएका युवाको रिपोर्ट नेगेटिभ
दाङ, जेठ ३१ । शनिवार मृत्यु भएका दाङको क्वारेन्टिनमा बसेका प्यूठानका १७ बर्षीय युवाको परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं. ६ स्थित भुटनेटा क्वारेन्टिनमा बसेका १७ वर्षीय युवकको शनिवार विहान बुटवल लैजाँदै गर्दा बाटो मैमृत्यु भएको थियो ।
बंगलाचुली गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक भक्तबहादुर जिसीले ती युवाको मृत्यु पछि शनिवार दिउँसो पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभआएको जानकारी दिए । मृतक प्यूठानको माण्डवी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ आँपचौर निवासी हुन । ती युवा जेठ ९ गते छिमेकी देशभारतवाट दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाको वडा नं. ५ स्थित झेलनेटा स्थित सुधा माविको क्वारेन्टिमा २ दिन बसेका थिए ।
त्यसपछि उनलाई २ दिन पछि जेठ ११ गते वडा नं. ६ को भुटनेटा क्वारेन्टिनमा सारिएको थियो । ती युवाको जेठ २१ गते स्वाव संकलनगरेर परीक्षणको लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएको थियो । मृत्यु पछि मात्रै उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जिसीलेजानकारी दिए ।
शुक्रवार बेलुका क्वारेन्टिमै स्वासप्रश्वासमा समस्या हुनुका साथै बान्ता समेत भएपछि राति नै उनलाई अस्पताल लगिएको भएपनिउनलाई कुनैपनि अस्पतालले भर्ना गर्न मानेका थिएनन् । विहान मात्रै उनलाई दाङवाट बुटवल लैजाने क्रममा विहान १० बजेतिर बाटोमैमृत्यु भएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक जिसीले जानकारी दिए । मृत्यु भएका युवाको शव गृह जिल्ला प्यूठान पठाइएको छ ।